Global Aawaj | लघु कथा : नयाँ घर लघु कथा : नयाँ घर
लघु कथा : नयाँ घर
आज पुरानो घर सुनो छ । नयाँ घरमा रमाइलो छ । स–परिवार केही समय सँगै बस्न पाइयो । यसको जस त्येही पापी कोरोनालाई ! मेरो अपुरो परिवारमा भाउजू, दाजु, कान्छो छोरा अर्जुन थपियो । मेरो भाग्य जुट्यो । एउटै घर मात्रै भुइँ तला र माथिल्लो तला । हाम्रो घर मेरै आमा बुवा को सन्ततिले भरियो । मेरि उनिलाई जेठानी दिदि जेठाजू ।
भाइलाई दाइ भाउजू । आमालाई छोरा बुहारी, नाति । मेरा छोरा छोरीलाई दाइ र ठुलो बुवाआमा मिल्यो कत्ति मज्जा । आज बाबा भएको भए आमा भन्दा रमाउनु हुन्थ्यो होला ! के गर्नु म सानै छदा दैवले झुक्कायो । ईश्वर लाई नमन छ ढिलै भएपनि घर बनाउने निउमा जे होस सबै परिवार भेट भो सारै आनन्दित भए । बाल्यकाल को सम्झना आयो । पुरै मज्जा लिए ।दिनभर काम्को थकाइ बिर्से, जाडो भरी भट्ट खाए ।
कहिले तिउन चाखे । चिल्ला रोटी खाए । बाटोमा दाजुभाइ खुव घुमियो । मेरो विद्यार्थी र इस्ट्मित्रको संयुक्त नमस्कार छुट्टै मज्जा । कोहिले त दाजुलाई म जस्तै ठान्दै झुकिए छन । यहीँ कुरा बेलुकी गरेर राति १२ बजाइयो । छोरो साथी कमैको हुने अवसर मिल्छ । हामी बाबुछोरा राम र अर्जुन भएको पत्तो नै पाइन । घर वाट थोरै घुमाउरो पाइला गरे छोरी निरा र दुर्गा ज्वाइ, नातिनातिना जे पायो त्यही खाओ । गफ कत्ति गर्नु । आज मेरो पुरानो घरमा कोहि नभए जस्तो पाए !
फ़ेरि चित्त बुझाए पुर्व तिर घरायसी झिटि बोकेको छोटा हात्ती तिर हेरे तर वाइ गर्ने हात उठेन ।टुलुटुलु हेरि रहे । आफूले आफै लाई सोधे अब म मेरो परिवार लाई पाँच सात मिनेटमा भेट्न सक्छु । भोलि देखि कोहि मान्छे भेटे भने भन्छु उ अल्लि पर चार नम्बर मा दाइको नयाँ घर छ पहिला यहीँ हुनुहुन्थ्यो अहिले नयाँ घरमा सर्नु भो ।